Ndiza kuhlala ndikhumbula utitshala wam wezoqoqosho kwisikolo samabanga aphakamileyo, uMnu Dilk. Ngaphandle kobuqili bokuzibamba xa kwakucacile ukuba wayefuna ukuqalekisa (? Ewe… iiBUGS !?) Ukusetyenziswa kwakhe okuphindaphindayo kweeklasikhi wakwazi ukuqhuba ezinye zobulumko kwingqondo yam eyongezwe ngehomoni. Phakathi kweentandokazi zakhe:
Ukuba uyasilela ekucwangciseni, uceba ukusilela.
Ngoku, ngaphambi kokuyilwa kweeposta ezoyikisayo ezinemifanekiso yemisila yomnenga kunye nabantu abakhwela ezintabeni ozibona kuzo zonke iiofisi zomdibaniso. Ukuhanjiswa kwengcebiso yesilumko yayiyintsimi yabazali bakho, ootitshala, kunye ne-PBS. Ngaphandle kokungafuneki kweso siluleko, esi sinamathele kum.
Ngoku kubomi bam bobuchwephesha, ukucwangcisa kuthatha ixesha elibalulekileyo, kwaye kunesizathu esivakalayo. Xa ubeka umxholo kunye isicwangciso seendaba zoluntu, owona msebenzi ubalulekileyo kukuseka ukuba zeziphi amaqonga kunye neenkonzo eziluncedo kakhulu kwiimfuno zakho kwaye ucwangcise indlela yakho ngokufanelekileyo.
Ayisiyiyo kuphela ukuthatha indlela yewilly-nilly ukungcolisa uphawu lwebrand yakho, ikwanenkcitho kwezemali. Ngaphandle kogcino-zincwadi oluchanekileyo lwento eyenziweyo apho-kunye nexesha elichithwe ukuyenza-iinzame zakho ezikwi-Intanethi yinkcitho epheleleyo yexesha nemali.
Nayiphi na ivenkile yedijithali exabisa ityuwa yayo iya kukufaka kwinkqubo yokucwangcisa. Ukuba abenzi njalo, babuze malunga naloo nto. Ukuba banesiporho okanye haw okanye abanayo, babaleke. Uya kufumana uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwentengiso luyancipha kwaye akukho nto ingako ungayibonisa yona ngaphandle kokutshixiswa kweetsheki.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukuba inkampani yakho ikwindawo yokuzihambela yodwa kwindawo yedijithali, ndincoma kakhulu ukuba ujonge Isikhokelo se-CMO kwiLandscape Landscape. Ngokusisiseko iphepha lokukhohlisa kwimidiya yoluntu kwizibonelelo kunye nokusilela kumaqonga aphezulu kunye neenkonzo. Uhlalutyo lwenziwa ngu Umgangatho we97th, kwaye sisikhokelo esikhulu sephepha elinye.
Zininzi iinkonzo zenethiwekhi yoluntu phaya; akukho namnye olungileyo, njengoko ukuzama ukuzisebenzisa zonke akusebenzi. Akukho mpendulo, akukho ndlela inye yemithombo yeendaba zentlalo esebenza kubo bonke abathengi. Ngokuzibandakanya kucwangciso olucingayo, nolwakhayo, ulisebenzisa kakuhle ixesha nemali yakho.
tags: cmoImidiya yokuncokolaimeko yemidiya yoluntuisicwangciso semidiya yoluntu
Mar 8, 2010 ngo 4:52 PM
Ukuqala nje ngeendaba zosasazo kunye nokufunda okuninzi yonke imihla. Ndisacacisa ukugxila kwam njengoko ndisiya phambili. Indawo enkulu apha! Ukukhangela phambili ekufundeni ngakumbi.
Mar 9, 2010 ngo 1:36 PM
Ngokubhekisele kwibinzana elithi "Ukuba uyasilela ekucwangciseni, uceba ukusilela" Ndiza kuthi yinyani ngokupheleleyo. Onke amaphulo osasazo kwezentlalo kufuneka abe nentsingiselo, injongo kunye nenjongo yokugqibela. Ukusetyenziswa kothungelwano lwezeNtlalontle kuye kwanda kumawakawaka ngamathuba amashishini amancinci ekufuneka ukuba enze ulwazi ngebrand, aphucule inkonzo yabathengi, andise ukuthengisa kunye nokwakha ubudlelwane. Yintoni eyona nto iphambili xa sele uyile isicwangciso sakho? Ukubakho, yakha indawo ohlala kuyo kwaye uyikhathalele!
Ndicebisa le mpendulo ilandelayo http://bit.ly/aqAGbe kwi- Startups.com, apho uMaria Sipka akhankanya isicwangciso esineenkcukacha sokwakha uluntu lwakho kwi-intanethi.
I-BTW, ungabeka i-Q & A´ enxulumene neshishini lakho
Mar 10, 2010 ngo-10: 10 AM
Olu luluhlu olukhulu, uPete. Enkosi ngokufunda kunye negalelo.
Uninzi lwabantu lusilele ukujongana nenyathelo lokuqala (cinga malunga nento ofuna ukuyiphumeza) kangangokuba yonke inkqubo ayinamsebenzi. Ngaphandle kweenjongo ezicacileyo kunye neenjongo zokusebenzisa iimetriki, umane udubula kuqala kwaye ubuze imibuzo kamva.